ဆရာတော်ကိုယ်တော်တိုင်အံ့အားသင့်ခဲ့ရတဲ့ မင်္ဂလာဆွမ်းတနပ် - Myanmarload
လွန်ခဲ့သော ၂၈ နေ့ က 12:40 March 21, 2019
ပြည်တွင်းမှာပြောင်းလဲလာတဲ့ခေတ်စနစ်တွေနဲ့အညီ မထင်မှတ်ထားလောက်တဲ့အရာတွေကလည်း နေ့စဉ်ဖြစ်ပွားလာတာကိုတော့အားလုံးလည်း သိမြင်နေကြမယ်ထင်ပါတယ်။ လိင်တူလက်ထပ်ခြင်း၊ လိင်ပြောင်းခြင်းနှင့် လက်ရှိအဖြစ်များလာတဲ့ အသက်မပြည်လက်ထပ်ပေါင်းသင်းခြင်းတွေကတော့ ပရိသတ်တွေကြားရေပန်းစားလျှက်ရှိတာတွေ့ရပါတယ်။
မကြာသေးမီကလည်း အသက်၁၁နှစ်အရွယ် ၃တန်းကျောင်းသားနဲ့ ၁၃နှစ်အရွယ် ၆တန်းကျောင်းသူလေးတို့ရဲ့ မင်္ဂလာဆွမ်းကျွေးကတော့ ပရိသတ်တွေကိုအံ့အားသင့်စေမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ဖြစ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဝါရှောင်ဆရာတော်ဖေ့စ်ဘွက်တွင်
ဆွမ်းဂျိုင့်လေးကိုင်ပြီး ပြုံးတုံ့တုံ့ မခို့တရို့ပုံစံလေးတွေနဲ့ မျက်နှာလေး
လူကြီးဖြစ်သူက…သွား¡ ဘုန်းဘုန်းကို သွားကပ်လို့ ပြောလိုက်တော့
မေးလိုက်တဲ့အခါ သူတို့၂ယောက်က "မင်္ဂလာဆွမ်း"ပါ ဘုရားတဲ့!
ဟင်¡¡¡ဆိုပြီး မယုံနိုင်လို့ ပါလာတဲ့လူကြီးဖြစ်သူကို လှမ်းကြည့်တဲ့အခါ
သူက "ဟုတ်တယ် ဘုရား!မင်္ဂလာဆွမ်းပါ "တဲ့!
ဒါနဲ့ ကိုယ်က"တကာကြီးရဲ့ သားလား'?လို့ မေးလိုက်တော့ မဟုတ်ဘူး
မိဘတွေက အိမ်မှာ ဧည့်ခံနေလို့ လိုက်ပို့ပေးတာပါ ပါဝါနိုင်းငှက်ပျောခြံကပါ"တဲ့!!!
သမီးကကော? 13နှစ် တဲ့!
ကျောင်းမနေကြတော့ဘူးပေါ့? ဟုတ် တဲ့!
ကောင်မလေးက ၆တန်း တဲ့!
ငှက်ပျောခြံမှာ နေ့စားလုပ်ကြတယ် ဘုရားတဲ့!
လိုက်ပို့တဲ့ လူကြီးက သူတို့၂ယောက်က ခိုးပြေးကြလို့
မိဘတွေက လိုက်ရှာခေါ်ခဲ့ပြီး ပေးစားလိုက်ရတော့တာဘုရား တဲ့_
ဒါနဲ့ ကိုယ်က သူတို့၂ယောက်ကိုမေးကြည့်လိုက်ပြန်တယ်…
သားတို့က အသက်မှ မပြည့်သေးတာ မှတ်ပုံတင်လည်း မရှိသေးတော့
ရထားလက်မှတ်ဝယ်လို့ ရသလား?ဆိုတော့ ထောက်ခံစာနဲ့ဝယ်တာ တဲ့!
မိဘတွေကို ဘယ်လိုပြောပြီးသွားတာလဲ?မေးပြန်တော့ ရွာကို ခဏပြန်
"သားက သူ့ကို့ဘယ်လို ရည်းစားစကားပြောတာလဲ?
ဖုန်းနဲ့ပြောကြတာ တဲ့!" ဟူ၍ စာသားများစွာနှင့်အတူ ဆရာတော်ကြီးကတော့ ပြန်လည်မျှဝေပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ထိုနောက်ဆရာတော်ကြီးကတော့ ၎င်းဇနီးမောင်နှံ့နှစ်ဦးကို ဆုံးမစကားများစွာနှင့်အတူ ဆုတောင်းပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ အံ့အားသင့်စရာဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ မင်္ဂလာဇနီးမောင်နှံ့ပုံရိပ်လေးတွေကို ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
Photos - ဝါရှောင်ဆရာတော်
Page generated in 0.0100 seconds with5database query and6memcached query.